Eksodho 28 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Ashaninka Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Emberá (Northern) Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Motu Mutauro Wemasaini WekuJamaica Mutauro Wemasaini wechiBelgian French Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFlemish Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAlbania Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Navajo Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Roman) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zulu
Nguo dzemupristi (1-5)
Homwe yepachipfuva (15-30)
Urimu neTumimu (30)
Nguo isina maoko (31-35)
Ngowani ine karata kanopenya kegoridhe (36-39)
Dzimwe nguo dzemupristi (40-43)
28 “Utore pakati pevaIsraeri Aroni mukoma wako nevanakomana vake kuti vashumire sevapristi vangu,+ Aroni,+ pamwe chete naNadhabhi naAbhihu,+ Eriyezari naItamari,+ vanakomana vaAroni.+ 2 Ugadzirire Aroni mukoma wako nguo tsvene, dzinoita kuti akudzwe uye dzakanaka.+ 3 Utaure nevanhu vese vane unyanzvi hwekugadzira zvinhu,* vaya vandakazadza nemweya weuchenjeri,+ kuti vagadzire nguo dzaAroni dzekuita kuti ave mutsvene, ashumire semupristi wangu. 4 “Idzi ndidzo nguo dzavanofanira kugadzira: homwe yepachipfuva,+ efodhi,*+ nguo isina maoko,+ nguo refu yejira rakaita mabhokisi mabhokisi, ngowani,*+ nebhandi rejira;+ vanofanira kugadzirira Aroni mukoma wako nevanakomana vake nguo tsvene idzi, kuti ashumire semupristi wangu. 5 Vashandi vane unyanzvi hwekugadzira zvinhu vanofanira kushandisa goridhe, shinda yebhuruu, shinda yepepuru,* shinda tsvuku, neshinda chena yakanaka. 6 “Vanofanira kugadzira efodhi vachishandisa goridhe, shinda yebhuruu, shinda yepepuru, shinda tsvuku, nejira rakagadzirwa neshinda chena yakakoswa, uye zvinofanira kurukirirwa pajira racho.+ 7 Inofanira kuva nezvidimbu zvemachira zvepamapfudzi zviviri zvinoibatanidza kumicheto yayo miviri. 8 Bhandi rakarukwa,+ rinosonererwa paefodhi rekuisunga kuti ibate, rinofanira kugadzirwa nezvinhu zvimwe chetezvo zvakagadziriswa efodhi yacho zvinoti: goridhe, shinda yebhuruu, shinda yepepuru, shinda tsvuku, nejira rakagadzirwa neshinda chena yakakoswa. 9 “Utore matombo maviri eonikisi,+ wonyora mazita evanakomana vaIsraeri paari,+ uchiita zvekutemera, 10 mazita matanhatu padombo rimwe chete uye mamwe mazita matanhatu pane rimwe racho, akarongwa maererano nekuberekwa kwavo. 11 Munhu anonyora pamatombo achiita zvekutemera achanyora mazita evanakomana vaIsraeri pamatombo acho maviri, sezvaanoita paanotemera mashoko pachidhindo.*+ Unofanira kuzoaisa muzvibatiso zvegoridhe. 12 Uise matombo acho maviri pazvidimbu zvemachira eefodhi epamapfudzi, kuti ave matombo ekuyeuchidza vanakomana vaIsraeri,+ uye Aroni ngaatakure mazita avo pamberi paJehovha pamachira ake maviri epamapfudzi kuti chive chiyeuchidzo. 13 Ugadzire zvibatiso zvegoridhe, 14 necheni mbiri dzegoridhe rakanatswa dzakaita setambo yakakoswa,+ wodzisungirira pazvibatiso zvacho.+ 15 “Ita kuti munhu anomenda machira agadzire homwe yepachipfuva yekutonga.+ Inofanira kugadzirwa nezvakashandiswa pakugadzira efodhi zvinoti, goridhe, shinda yebhuruu, shinda yepepuru, shinda tsvuku, nejira rakagadzirwa neshinda chena yakakoswa.+ 16 Painenge yapetwa inofanira kuva nemativi mana akaenzana, yakareba sipani* imwe chete uye yakafara sipani imwe chete. 17 Uise matombo pairi, pave nemitsara mina yematombo. Mutsara wekutanga ngauve nerubhi, topazi, neemaradhi. 18 Mutsara wechipiri ngauve netekoizi, safaya, nejaspa. 19 Mutsara wechitatu ngauve nereshemu,* agati, neametesti. 20 Mutsara wechina ngauve nekrisoriti, onikisi, nejedhi. Anofanira kuiswa mutumafuremu twegoridhe. 21 Matombo acho achaenderana nemazita evanakomana 12 vaIsraeri. Dombo rimwe nerimwe rinofanira kunyorwa richiita zvekutemerwa sezvinoitwa panonyorwa mashoko pachidhindo, zita rimwe nerimwe richimiririra rimwe remadzinza acho 12. 22 “Ugadzire cheni dzakamonwa pahomwe yepachipfuva, dzakaita setambo dzegoridhe rakanatswa.+ 23 Ugadzire marin’i maviri egoridhe pahomwe yepachipfuva uye uise marin’i acho maviri kumicheto yehomwe yepachipfuva. 24 Upinze tambo dzacho mbiri dzegoridhe nemumarin’i maviri ari kumicheto yehomwe yepachipfuva. 25 Upinze miromo miviri yetambo dzacho mbiri nemuzvibatiso zviviri, woita kuti zvibate machira epamapfudzi eefodhi, nechekumberi. 26 Ugadzire marin’i maviri egoridhe, woaisa kumicheto miviri iri nechemukati mehomwe yacho kwakagumha efodhi.+ 27 Ugadzire mamwe marin’i maviri egoridhe pamberi peefodhi, pazasi pemachira maviri epamapfudzi, pedyo nepaanobatana nayo, pamusoro pebhandi rakarukwa reefodhi.+ 28 Homwe yepachipfuva inofanira kubatwa netambo yebhuruu, ichisunganidzwa marin’i ayo nemarin’i eefodhi. Izvi zvichaita kuti homwe yepachipfuva igare iri panzvimbo payo paefodhi, pamusoro pebhandi rakarukwa. 29 “Aroni anofanira kutakura mazita evanakomana vaIsraeri pahomwe yepachipfuva yekutonga yakafukidza pamwoyo pake paanopinda muNzvimbo Tsvene kuti chigare chiri chiyeuchidzo pamberi paJehovha. 30 Uise Urimu neTumimu*+ muhomwe yepachipfuva yekutonga, uye ngazvive pamwoyo paAroni paanouya pamberi paJehovha, uye Aroni anofanira kutakura zvinoshandiswa pakutonga vaIsraeri pamwoyo pake pamberi paJehovha nguva dzese. 31 “Unofanira kugadzira nguo isina maoko yekupfeka pasi peefodhi uchishandisa shinda yebhuruu chete.+ 32 Kumusoro kwayo* nechepakati payo panofanira kunge pakavhurika. Pakavhurika pacho ngapaiswe nemugadziri wemachira mupendero unopatenderedza. Panofanira kunge pakavhurika sezvakaita penguo yemurwi yesimbi, kuti parege kubvaruka. 33 Unofanira kugadzira mapomegraneti* neshinda yebhuruu, shinda yepepuru, uye shinda tsvuku uchitenderedza mupendero wayo wese, wogadzirawo mabhero egoridhe ari pakati pawo. 34 Unofanira kutenderedza mupendero wenguo yacho uchiisa apa bhero regoridhe apa pomegraneti, apa bhero regoridhe apa pomegraneti. 35 Inofanira kupfekwa naAroni pakushumira kwake, uye kurira kwemabhero acho ngakunzwike paanopinda munzvimbo tsvene pamberi paJehovha uye paanobuda, kuti arege kufa.+ 36 “Unofanira kugadzira karata kanopenya kegoridhe rakanatswa, wokanyora uchiita zvekutemera sezvinoitwa chidhindo, wonyora kuti: ‘Utsvene ndehwaJehovha.’+ 37 Ukasungirire pangowani+ netambo yebhuruu; kanofanira kugara kari pamberi pengowani. 38 Kanenge kari pahuma yaAroni, uye Aroni achazvidavirira kana paine munhu anenge akanganisa chimwe chinhu pazvinhu zvitsvene,+ zvinotsaurwa nevaIsraeri vachipa sezvipo zvitsvene. Kanofanira kugara kari pahuma yake, kuitira kuti vagamuchirwe pamberi paJehovha. 39 “Unofanira kuruka nguo refu yejira rakanaka rakaita mabhokisi mabhokisi, ngowani yejira rakanaka, uye bhandi rejira.+ 40 “Ugadzirewo nguo refu, mabhandi emachira, uye zvekupfeka mumusoro zvevanakomana vaAroni,+ zvinoita kuti vakudzwe uye zvakanaka.+ 41 Upfekedze Aroni mukoma wako nevanakomana vake vaainavo, uvazodze+ uye uvagadze,*+ wovatsvenesa, uye vachashumira sevapristi vangu. 42 Uvagadzirirewo zvikabudura* zvejira kuti vafukidze nyama yavo isina kufukidzwa.+ Zvinofanira kutangira muchiuno kusvikira muzvidya. 43 Zvinofanira kupfekwa naAroni nevanakomana vake pavanopinda mutende rekusanganira kana kuti pavanoenda paatari kuti vashumire munzvimbo tsvene, kuitira kuti varege kutadza, vofa. Uyu murau nekusingagumi kwaari nekuvana* vake vanomutevera.
^ ChiHeb., “vane mwoyo yakachenjera.”
^ Iri ijira raisungwa mumusoro richiita zvekumonererwa roita seheti.
^ Kana kuti “mvere dzemakwai dzakadhayiwa neruvara rwepepuru yakatsvukuruka.”
^ Kana kuti “pachisimbiso.”
^ Anenge masendimita 22,2. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Dombo iri rinokosha harizivikanwi kuti rakanga rakaita sei.
^ Kana kuti “Pekupinza napo musoro.”
^ ChiHeb., “uye uzadze ruoko rwavo.”
^ Kana kuti “zvipfeko zvemukati.”